I-North Woods Getaway - I-Airbnb
I-North Woods Getaway
Stewartstown, New Hampshire, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Corinna
U-Corinna Ungumbungazi ovelele
Indlu yethu eyakhiwe ngamapulangwe iwuhlelo oluhle lwendawo evulekile enekhishi elivulekile nendawo yokudlela isidlo sasekuseni, amakamelo okulala angu-2 ne-loft. Indlu yethu eyakhiwe ngamapulangwe itholakala amamayela angu-6 ukusuka esikhungweni se-Colebrook, ukufinyelela kwe-Direct ATV kanye nokufinyelela emzileni we-Snowmobile, Gibela uhlelo lomzila wamahlathi namakhulukhulu emizila ye-UTV/ATV. amamayela angu-5 kuphela ukusuka e-Big Diamond pool yokudoba ne-Kayaking.
125.00 nge-2 , umuntu ngamunye owengeziwe ngu-25.00 ubusuku ngabunye.
Kudingeka imali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo engu-300.00
Umgodi womlilo, umgodi wezicathulo zamahhashi, umdlalo womgodi we-Corn, I-WIFI, iskrini esisha esingu-55 inch se-HD esine-backlight, ibha yomsindo yamabhayisikobho noma i-bluetooth ehambisana nokusakaza emculweni wakho owuthandayo kusuka efonini yakho, i-TV engu-32 inch Flatsreen kumakamelo okulala i-DVD, ividiyo ye-Amazon prime, i-Hulu, i-Netflix, i-Disney+, isistimu yomdlalo ye-Wii, isevisi yeselula nge-WiFi kuphela.
Ikhishi linezinhlobonhlobo zikagesi kanye nohhavini, i-Microwave, umshini wekhofi, i-toaster, ifriji, amapuleti, izitsha zokudla, amabhodwe, amapani, izinto zokupheka eziyisisekelo.
Ukupaka okuningi kwezimoto ne-ATV ngakwesokudla sendlu eyakhiwe ngamapulangwe.
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe isendaweni engasese engama-acre angu-7, sicela ugcine i-ATV kanye Nezimoto ziphumile otshanini bangaphambili nasemizileni kuphela. Phakathi nenkathi yokutshuza eqhweni inganqamula ingaphambili lendlu eyakhiwe ngamapulangwe endaweni ekhethiwe kuphela ukuze ifinyelele emizileni yeqhwa
UCorinna Ungumbungazi ovelele